Jeneraly Raveloarison Herilanto
samedi, 22 octobre 2016 08:46
Ministeran’ny Angovo sy ny Akoran'Afo : Roa volana tsy voasolo ny minisitra nodimandry
Banga efa roa volana izao ny toeran’ny minisitry ny Angovo sy ny Akoran'Afo, taorian’ny nahafatesan’ny minisitra Ramanantsoa Rodolphe. Ny minisitry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana, Raveloarison Herilanto no misahana vonjimaika io ministera io hatreto, ao anatin’ny fotoana mampamaivay ny fahatapatapahan-jiro saika manerana ny Nosy, izay nampitroatra ny mponina toy ny nitranga tao Farafangana tamin’ny heriny androany ka nahamay kilahotohoto ny biraon’ny Jirama ao an-toerana.
Televiziona Malagasy : Folo volana tsy manana Tale
Nesorina tampoka ny 30 desambra 2015, ampitson’ny fifidianana Loholona, i Lantomalala Rasata, Tale tompon-toerana farany tao amin’ny fahitalavi-panjakana. Folo volana aty aoriana, tsy mbola nisy fanendrena Tale ho an’ny Televiziona Malagasy.
vendredi, 21 octobre 2016 17:59
Ambositra : Tsy misy herinaratra nanomboka tamin’ny 10 ora alina
Tapaka tanteraka ny jiro aty Ambositra nanomboka ny alakamisy 20 oktobra tamin’ny folo alina ka hatram’izao. Gazoala no mampihodina ireo milina mpihary herinaratry ny Jirama aty Ambositra. Lany tanteraka anefa ny gazoala. Anio alina vao mety ho tonga ny famatsiana manaraka. Mandrapaha aloha izany dia maizina ny tanàna nefa ny asan-jiolahy mirongatra.
vendredi, 21 octobre 2016 16:58
Toamasina : Lehilahy iray Mpampianatra ao aminn’ny CEG Augagneur tratra nibizina basy
Teo am-pitadiavana mpividy indrindra ity mpampianatra ity no saron’ny Polisy tao Tanamakoa. Nanaovana velam-pandrika ka tratra tao an-tranony tao Vohitsara Barikadimy kosa ny namany. Nokasain’izy ireo hamidy 8 hetsy Ariary ilay basy poleta.
vendredi, 21 octobre 2016 14:38
Sary Sobika Antsalova
Antsalova : Mpampianatra 30 nozaraina « contrat »
Andiany fahatelo tamin’ireo mpampianatra FRAM vao noraisina ho mpiasam-panjakana ireto notolorana taratasy fifanarahana arak’asa ireto, nandritra ny lanonana natao androany. Nisy ihany koa fanomezana « kit scolaire » anjaran’ny Fari-piadidiam-pampianarana Antsalova, vatafahitalavitra roa lehibe miampy « tablettes » 50 isa ho an’ny lisea, finday ho an’ireo talen-tsekoly miisa 42 ary sertifika marika nahavitana fiofanana maha mpampianatra.
vendredi, 21 octobre 2016 14:13
Lapan'ny Tanàna Sambava : Tsy notokanana akory dia nisy nanimba
Vaky sahady ny varavarankelin’ny Lapan'ny Tanànan’i Sambava, nefa mbola tsy notokonana akory. Vao avy nasiam-panavaozana ity foto-drafitrasa ity ary miandry fitokanana no izao misy manimba izao sahady.
vendredi, 21 octobre 2016 11:22
Ambatondrazaka : Mankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Angovo
Tanterahina eto an-drenivohitry ny Faritra Alaotra Mangoro anio zoma 21 oktobra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Angovo. Mirehitra tsara ny jiro amin’izao, toy ny tsy niaina delestazy lavareny ny tanàna. Tapaka eo anelanelan’ny amin’ny 9ora alina ka hatramin’ny 8ora maraina, sy eo anelanelan’ny mitatao vovonana ka hatramin’ny 5ora hariva ny jiro teto Ambatondrazaka tamin’iny herinandro lasa iny. Tsy mianatra ny mpianatra, indrindra ny amin’ny sekolim-panjakana, toy izany koa ny mpiasam-panjakana eto Ambatondrazaka fa hanotrona manampahefana noho izany lanonam-panjakana izany.
Melaky : Nalevina im-pito mandifotr’olona ny Dinan'i Foara fa manelingelina ny fahombiazany
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny Faritra Melaky. Sady mangalatra omby no mamono ireo dahalo. Nisy omby 900 be izao, very tamin’ny volana mey 2016 iny. Niazo an’Ankavandra ary tao no nanjavona ny omby. Hatreto tsy misy Fanjakana mihetsika momba an’io, fa samy mody fanina avokoa, na dia miantso vonjy aza ny Vahoaka any an-toerana. Nampandry fahalemana iny Faritra iny “Dinan'i Foara”. Nalevina im-pito mandifotr’olona anefa io Dina io fa “manelingelina ny fahombiazany”.
vendredi, 21 octobre 2016 07:43
Savorovoro tao Ampasimbe Manantsatrana : Hatolotra ny Fampanoavana anio ireo 47 voasambotra
Fandavana fampiharana didim-pitsarana, fanoherana mpitandro ny filaminana, fanoherana fametrahana Ben’ny tanàna. Ireo no anisan'ny vesatra iampangana azy 47 voasambotra vokatry ny fifandonana ka tsy nahatanteraka ny fametrahana tamin’ny toerany ny Ben’ny tanàna tao Ampasimbe Manantsatrana, Distrika Fenoarivo Atsinanana ny 14 oktobra 2016. Vita ny famotorana azy ireo teo anivon’ny Zandary, ka hatolotra ny Fampanoavana eto amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Toamasina anio izy ireo.
Sambava : Halevina rahampitso ny vady navelan’i Mahazaka Clérmont Gervais
Rahampitso zoma 21 oktobra no hanaovana veloma farany an’i Tompokovavy Rosaline, vady navelan’i Mahazaka Clérmont Gervais, Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra taloha. Mpanolotsaina manokan’ny praiminisitra teo aloha Rabemananjara Charles ary efa Lehiben’ny Distrika teto Sambava ihany koa. Tonga nanotrona azy taty Sambava ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena Rakotomamonjy Jean Max ary teo koa ny Praiminisitra teo aloha jeneraly Rabemananjara Charles. Any amin’ny fasan-drazana Ankiakamay, Kaominina Morafeno no hametrahana ny razana.
Page 254 sur 354